हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार किन अगरबत्तीलार्इ मुखले फुकेर निभाउनु हुँदैन ? थाहा पाउनुहोस - www.kchhakhabar.com
हिन्दु धर्म मान्यता अनुसार किन अगरबत्तीलार्इ मुखले फुकेर निभाउनु हुँदैन ? थाहा पाउनुहोस
प्रकाशित मिति: आइतबार, भाद्र २५, २०७४ समय: १३:५१:५३
हिन्दु धर्ममा पुजा पाठका क्रममा अगरबत्ति महत्वपूर्ण मानिन्छ । अगर बत्ति विना पुजा नै हुँदैन भन्दा पनि हुन्छ । भगवानलाई चढाउन पनि अगर वत्ति चढाउने गरिन्छ । भगवानको भक्ति, अराधाना र स्तुतिका क्रममा पनि धुप, दीप र अगरबत्ति अनिवार्य हुन्छ । कतिपय मानिसहरु अगरबत्तिलाई फुकेर निभाउने गर्छन् । शास्त्रका अनुसार यसो गर्नु गलत काम हो । साथै एक व्यवहारिक कारण पनि जोडिएको छ।
खासमा प्रकृतिमा पाँच तत्व (पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि र आकाश) हुन्छन् । अग्नि त्यसमध्ये एक हो । हिन्दु धर्म शास्त्र अनुसार जलका देवता बरुण मानिन्छन् भने अग्निका देवता अग्निदेव । अगरबत्ति वा कुनै पनि आगो बल्ने बत्तिमा मुखले फुकेर निभाउनु अग्निको अपमान मानिन्छ । फुक्नु अग्निलाई जुठो बनाउनु पनि मानिन्छ ।
अग्निलाई जुठो पार्नु घरमा दरिद्रता निम्त्याउनु रहेको समेत शास्त्रमा उल्लेख छ । प्रकृतिका ५ तत्व मध्ये १ अग्नि यज्ञको प्रधान अंग समेत हो । यसले प्रकाश पर्ने सबैमा पुरुषार्थ प्रदान गर्ने समेत मानिन्छ । यसकारण जीवनको महत्वपूर्ण अंगअग्निलाई कहिले पनि मुखले फुकेर निभाउनु हुँदैन ।
रोचक कुरा त यो छ कि अगरबत्ती वा कुनै पनि आगो मुखले फुकेर ननिभाउने मान्यताको पछाडी एक व्यवहारिक कारण पनि जोडिएको छ। आगोको नजिक मुख लैजादाँ दुर्घटना हुन सक्ने र अगरबत्तीबाट निस्केको धुँवा सिधै मुख वा नाक हुँदै शरिरमा प्रवेश गर्न सक्ने भएकाले पनि यसरी मुखले फुकेर आगो ननिभाउन भनिन्छ।